ऋतिक रोशनसँग विवाह गर्दै नायिका सोनाक्षी ! – ताजा समाचार
सोनाक्षी सिन्हा सेडक्सबारे किन कुरा गर्न चाहन्छिन् ?
दबंग फिल्मबाट बलिउडमा कदम राख्ने सोनाक्षी सिन्हा पहिलो पटक सेडक्स कमेडी फिल्म ‘खानदानी शफाखाना’ मा देखिनेछिन् ।
कहिले पनि सेडक्सबारे आमा–बुवासँग कुरा नगरेको व्यक्तिमा आफू पनि पर्ने सोनाक्षीले बताइन् । स्कूल र कलेजका दिनमा साथीहरुमार्फत् यसबारे जानकारी पाएको बताइन् ।